အဘယ်ကြောင့် walnut ကောင်းသောထွင်းထုပစ္စည်းဖြစ်သနည်း - Mibond စက်ပစ္စည်း
နေအိမ် / သတင်း / ဘလော့ / အဘယ်ကြောင့် walnut ကောင်းသောထွင်းထုပစ္စည်းဖြစ်သနည်း
အဘယ်ကြောင့် walnut ကောင်းသောထွင်းထုပစ္စည်းဖြစ်သနည်း
views:0 Author:ဆိုက်ကို Editor ကို အချိန် Publish: 2021-05-11 မူလ:ဆိုက်ကို
Walnut သည် walnut သစ်ပင်၏သစ်သားဖြစ်သည်။ တရုတ်နိုင်ငံ, တရုတ်နိုင်ငံ, တရုတ်နိုင်ငံ, တရုတ်ပြည်, တရုတ်နိုင်ငံအရှေ့ပိုင်းနှင့်တရုတ်နိုင်ငံအနောက်မြောက်တရုတ်နိုင်ငံ, တရုတ်နိုင်ငံ၏အနောက်မြောက်တရုတ်နိုင်ငံ, တရုတ်နိုင်ငံမြောက်ပိုင်းတွင်တရုတ်နိုင်ငံမြောက်ပိုင်းတွင်ဖြန့်ဝေခဲ့သည်။ ၎င်းသည်သစ်သား diy ပစ္စည်းကောင်းတစ်ခုဖြစ်သည်။
1 ။အပေြာင်း Cအိမ်အကြီးကူးရေး၏သစ်ချသီး
walnut ၏ Sapwood အညိုရောင်ဖြစ်ပါတယ်နှင့်စိတ်နှလုံးသည်အညိုရောင်ကိုခရမ်းရောင်ဖြစ်သည်. ၎င်း၏သစ်သားဂျုံစေ့သည်ဖြောင့်သောလှပ, တောက်ပသောတောက်ပမှု,နှင့်အဆိုပါဖွဲ့စည်းပုံအလတ်စားဖြစ်ပါတယ်. ယင်းတိကျသောဆွဲငင်အား 0.56 ဖြစ်ပါတယ်. Tသူသည်ထင်းသည်သိပ်သည်းပြီး elastic, Waring နှင့် cracking မဟုတ်,. It ကအလွန်အစွမ်းထက်တဲ့သစ်သားတစ်မျိုးဖြစ်ပါတယ်။
Walnut သည်သစ်မာပစ္စည်းဖြစ်သည်။ ဒါဟာလေ့ရှိပါတယ်စာချုပ်သေနတ်စတော့ရှယ်ယာ, လေကြောင်းရုပ်ပစ္စည်း, ထွင်းထုခြင်းနှင့်ကောင်းသောပရိဘောဂများဖြင့် ED ။ ၏ကြီးထွားမှုကြောင့်ဖြစ်သည်Burlsပင်စည်ပေါ်မှာယင်းtexture လှပသောနှင့်အစိုင်အခဲဖြစ်ပါတယ်. It သည်အဖိုးတန်သောဗိုင်းရပ်စ်နှင့်အလှဆင်ပစ္စည်းများဖြစ်ပြီးဈေးကွက်တွင်စျေးနှုန်းအလွန်မြင့်မားသည်။
Walnut မိသားစုတွင်သစ်သား 15 မျိုးရှိသည်အားလုံးအရောင်အားဖြင့်အမည်ရှိ။သူတို့ကတောင်အမေရိက, မြောက်အမေရိက, Oceania, အရှေ့အလယ်ပိုင်းဥရောပနှင့်အရှေ့အာရှတွင်ဖြန့်ဝေခဲ့သည်။ အသုံးအများဆုံး walnut အနက်ရောင် walnut, ရွှေ walnut နှင့်အနီရောင် walnut ။ တူညီသောအနက်ရောင် walnut သည်လည်းကွဲပြားခြားနားသောထုတ်လုပ်သည့်ဒေသများရှိသည်။ တရုတ်နိုင်ငံတွင် walnut သစ်ပင်အချို့ရှိသည်။ သို့သော်သူတို့သည်အခြားသူများနှင့်မတူပါမေြရာs နှင့်စျေးနှုန်းအများကြီးစျေးသက်သာဖြစ်လိမ့်မည်။ walnut အားဖြင့်လုပ်ငန်းများ၌နိုင်ပါတယ်Wood Grinder စက်နှင့်သေးငယ်တဲ့ polishing စက်.
စျေးကွက်နှင့်ပတ်သက်သည့်အနက်ရောင် walnut ပရိဘောဂများ၏ကုန်ကြမ်းများသည်အဓိကအားဖြင့်မြောက်အမေရိကမှအမေရိကန်ပြည်ထောင်စုမှဖြစ်သည်။ အမေရိကန်အနက်ရောင် walnut ပရိဘောဂများသည်နိမ့်သောမြင့်မြတ်သော, Black Walnut သည်ယူနိုက်တက်စတိတ်တွင်မျိုးသုဉ်းရန်အန္တရာယ်ရှိသည့်သစ်ပင်မျိုးစိတ်များဖြစ်သောကြောင့်လစဉ်တင်ပို့မှုကန့်သတ်ချက်သည်ကုဗမီတာ 2000 ကျော်မကျော်လွန်ပါ။ ကုဗမီတာတစ် ဦး တည်းလျှင်ကုန်ကြမ်းများ၏စျေးနှုန်းမှာ 10000 ကျော်လွန်ခဲ့ပြီးအနက်ရောင် walnut ပရိဘောဂများ၏စျေးနှုန်းမြင့်မားသည်။
3. အားသာချက်များနှင့်D၏ isavantagesBမလုံမလောက်မှုWalnut
① Walnut သစ်သားအရောင်သည်ကြော့ရှင်းသည်. Tသူကသစ်သားစပါးကိုခဲယဉ်းပြီးထူးခြားတဲ့,. Aပရိဘောဂကြိမ်မြောက်က၏လုပ်ကြော့နှင့်ရက်ရက်ရောရောဖြစ်ပါတယ်.
② Walnut ၏အစိုဓာတ်ပါဝင်မှုနိမ့်ကျပြီးကျယ်ပြန့်စွာတိုးချဲ့ခြင်းသည် Walnut ပရိဘောဂများအပေါ်သိသိသာသာသက်ရောက်မှုမရှိပါ.
③ Walnut ပရိဘောဂများသည်အက်ကွဲရန်နှင့်ပုံပျက်ရန်မလွယ်ကူပါ။
④၎င်းသည်ပြင်းထန်သောပူပြင်းသည့်ဖိအားပေးမှုစွမ်းရည်, ကြာရှည်ခံနိုင်မှုနှင့်နှလုံး0င်ရောက်ခြင်းနှင့်နှလုံး0င်ရောက်ခြင်းကိုခံနိုင်ရည်ရှိသည်။
⑤ Black Walnut ပရိဘောဂများတွင်မြင့်မားသောစုဆောင်းမှုတန်ဖိုးရှိသည်။
⑥ Black Black Walnut ပရိဘောဂကြေးဝါ, ဖန်နှင့်အခြားဒြပ်စင်များပါ0င်သော,
① Walnut ပရိဘောဂများ၏စျေးနှုန်းမြင့်မားသည်, သာမန်မိသားစုများအနေဖြင့်တတ်နိုင်သည်။
walnut ၏သစ်သားပုံစံသည် Mahogany နှင့်၎င်း၏ချုံ့ခြင်းနှင့်ကွေးခံခြင်းနှင့်ကွေးခံခြင်းနှင့်ကွေးခံမှုခံနိုင်ရည်မရှိခြင်းသည်အလယ်အလတ်ဖြစ်သည်။
③ပျက်စီးမှုကိုရှောင်ရှားရန် Walnut ပရိဘောဂများ၏ထိတွေ့မှုများကိုကောင်းစွာကာကွယ်ရန်လိုအပ်သည်။
④ Sapwood သည် LYCTUN မှပျက်စီးရန်လွယ်ကူသည်။ ၎င်း၏ကွေးခံမှုနှင့်ချုံ့ခွန်အားသည်အလယ်အလတ်ဖြစ်သည်။
အချို့ကရောင်းသူများသည် Catalpa Wood နှင့် Fraxinus Mandshuricica ကိုအနက်ရောင် walnut ပရိဘောဂများအဖြစ်ပြုလုပ်လိမ့်မည်sOlid Wood Veneer ပရိဘောဂသည် s ဖြစ်သည်အိုသောစင်ကြယ်သောအစိုင်အခဲသစ်သားပရိဘောဂများ၏ဆိုင်းဘုတ်အောက်မှာ,ဒီတော့ဒီဖြစ်ရပ်များကိုခွဲခြားရမည်ဖြစ်သည်။ Veneer ကိုယေဘုယျအားဖြင့်ပြုလုပ်သည်ကိုသတိပြုပါ‘အစိုင်အခဲသစ်သားဘောင် + အစိုင်အခဲသစ်သား Multi-layer ဘုတ်အဖွဲ့ Veneer’အစိုင်အခဲသစ်သားပရိဘောဂများဟုလည်းခေါ်သည်။
Wenzhou Mibond Machondery Co. , Ltd. သည်အမျိုးမျိုးထုတ်လုပ်သည်Diy Woods ကိရိယာများအပါအဝင်Mini Drill Press,သစ်သားပန်းပုရုပ်ကိရိယာများ,Rotary Tool ဆက်စပ်ပစ္စည်းအစုံစသဖြင့်၎င်း၏ထုတ်ကုန်များသည်ချမ်းသာကြွယ်ဝပြီး0န်ဆောင်မှုကောင်းသည်။ ကြိုဆိုပါတယ်
Diy Woodworking ကိရိယာများ အိမ်လုပ်ကိရိယာများ DIY ROTARED လေ့ကျင့်ခန်း MINI လျှပ်စစ်မီးပြောင်ပြောင်ပြောင်မှုကဘောပင် Wood Grinder စက် သေးငယ်တဲ့ polishing စက် Diy Woods ကိရိယာများ Mini Drill Press သစ်သားပန်းပုရုပ်ကိရိယာများ Rotary Tool ဆက်စပ်ပစ္စည်းအစုံ